मन्दिर पछाडि क्रुसको चित्र : क्रुसिफिकेसन या धार्मिक सहिष्णुता ? « गोर्खा आवाज
मन्दिर पछाडि क्रुसको चित्र : क्रुसिफिकेसन या धार्मिक सहिष्णुता ?
बानेश्वर शान्तिनगर स्थित प्रयाग मार्गको गेट नजिकै प्रयागेश्वरी भगवतीको मन्दिर पछाडिको भागमा क्रुसको पेन्टिङ गरिएको छ। मन्दिरको पछाडीको सेतो भागमा पानी रंङ्गले पोतेर निलो रंगले क्रुसको चित्र बनाइएको छ। हाइवेमै पर्ने यो मन्दिरमा बाटो हिड्ने सबै मानिसको नजर पर्ने भएतापनि यस विषयमा आजसम्म कसैले प्रश्न उठाएको भने छैन।
बानेश्वर आसपास घुम्दै गर्दा यो चित्र देखेपछि एकैछिनमा दिमाग स्थिर रहिरहन सकेन । सबै धर्मको उद्देश्य एउटै र सबै धर्मलाई समान सम्मान गर्नुपर्ने ज्ञान हुँदाहुदै पनि यो तस्वीरले एक्कासि मस्तिष्क बिथोलिदियो। पछिल्लो समय इसाइकरणका बारेमा विभिन्न संचार माध्यम एवं पत्रपत्रिकामा धेरै समाचार नसुनिएका होईनन् । यस प्रकारको पेन्टिङ्ग झट्ट हेर्दा जबर्जस्ति कोरिएको जस्तो देखिन्छ।
बिच सहरमा रहेको देवीको मन्दिरमा क्रुसको चित्र कोरिनुले कतै धार्मिक द्वन्दको संकेत दिएको त हैन ? कतै हिन्दुत्व र हिन्दुधर्मावलम्वीहरुलाई दिएको ठाडो चुनौती त होइन भन्ने प्रश्न पनि नआइरहन सक्दैन।
अर्को दृष्टिकोणले हेर्दा मन्दिरको अगाडिपट्टि देवीको मुर्ती भएको र पछाडि क्रुसको चित्रले धार्मिक सहिष्णुतालाई इङ्कित गरेको भन्न नमिल्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तै शान्तिनगर वरिपरि चर्च छ भन्ने संकेत दिनको लागि त्यो चित्र प्रयोग गरिएको भए मन्दिरको पछिल्लो भागमा नै किन ? भन्ने प्रश्नचिह्न पनि उठाउन सकिने अवस्था छ ।
यो चिन्ह हेर्ने हामिले त्यहाको ठाउँ हेरेनौ । त्यहाँ त्यस्तो चिनो अडाउने अरु ठाउँ थिएन । बाटो मा बोर्ड राखे त्यही का मान्छे ले निकालेर फालिदिन सक्थे । हामिले मन्दिर बनाएर फलानो मन्दिर जाने बाटो भन्दै लेख्न हुने तिनिहरुले यति राख्न नहुने भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ । त्यहा त्यति सानो बाटोको दुवैतिर घर नै घर छन् । अगाडि मन्दिरमा पुज्छन तर मन्दिर नजिकै थुप्रने फोहरको डंगुरमा थुक्छन । यद्यपि धार्मिक सहकार्य र सहिष्णुताको लागि त राम्रोसँग मिलाएर सबै धर्मको लोगो प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ठाडो प्रश्न पनि सँगसँगै उठाउन सकिन्छ । त्यो हुदा दुबैमा सहकार्यर समझदारी को भावना बिकास नि हुन्छ ।
तसर्थ मन्दिर पछाडि कोरिएको यस्तो पेन्टिङले धार्मिक सहिष्णुता देखायो या धार्मिक अतिक्रमणको संकेत हो हामी सबैले सोच्न जरुरी छ ।